Ciidamada Ciraaq oo dib u qabsaday qaybo ka mid ah magaalada Mosul - BBC News Somali
Ciidamada Ciraaq oo dib u qabsaday qaybo ka mid ah magaalada Mosul
Image caption Qiiqaa cirka isku shareeray markii ay ciidamadu weerarka qaadeen
Ciidamada Ciraaq ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen mid ka mid ah xaafadaha ku yaal galbeedka magaalada Mosul ka dib markii ay ku qaadeen weerar ballaadhan oo ay ku ekeeyeen dableyda kooxda la baxday Dawladda Islaamka.
Waxa xusid mudan in ciidamada Ciraaq bilaabeen hawlgallada milatari ee ay doonayaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul todoba bilood ka hor, ilaa haddana waxay ku guulaysteen in ay qabsadaan inta badan magaalada. Inta keliya ee gacanta ugu jirta kooxda la baxday Dawladda Islaamkuna waa qaybta qadiimka ah ee badhtamaha magaalada iyo dhawr xaafadood oo ku hareeraysan.
Ciidamada gaarka ah ee Ciraaq waxa u suurto galay in ay qabsadaan xaafadda Al-Sixa, sidaana waxa sheegay Kornayl Cabdelamiir Yaar Allah oo hawlgalka Mosul hogaaminaya.
Saddexdan xaafadood ee ay ciidamada Ciraaq haatan duullaanka ku qaadeen waxay dhammaantood ku yaallan dhinaca woqooyi ee qaybta qadiimka ah ee magaalada.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ku dhawaad laba boqol oo kun oo qof ay weli ku xannibanyihiin qaybaha kale ee ay Daacish gacanta ku hayso, arrintaasina waxay caqabad ku noqotay ciidamada Ciraaq oo u tudhaya dadka rayidka ah ee goobahaa degan.